तीन वर्षका नाबालकलाई आफ्नै दिदीले किन गरे हत्या ? « Drishti News – Nepalese News Portal
तीन वर्षका नाबालकलाई आफ्नै दिदीले किन गरे हत्या ?
२५ असार २०७८, शुक्रबार ६ : २९ मा प्रकाशित
काठमाडौं । कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–१ ब्लक नं. ८ का दिलिप बिष्टका साढे तीन वर्षका नाबालक छोरा विवेक बिष्टलाई आफ्नै दिदी नातापर्ने १५ वर्षकी किशोरीले योजना बनाएरै हत्या गरेको खुलेको छ ।
सुन्दै जीउ सिरिङ्ग हुने यो घटनाका कारण टीकापुर नगरपालिका स्तब्ध छ। सबैलाई यो घटनाले मर्माहत बनाएको छ । कैलालीका प्रहरी प्रमुख एसपी विश्व अघिकारीले हालसम्मको अनुसन्धानले हत्या भएको बताउँदै हत्याको मुख्य कारणमा विवेकले लगाएको चाँदीको बाला भएको खुलेको जानकारी दिए । ‘उनले कुलोको किनारमा पुगेपछि विवेकलाई तेर्सो परेको सिसमको रुखमा राखिन् । त्यही क्रममा उनले विवेकको खुट्टाबाट चाँदीको बाला निकालिन्। उनले चाँदीको बाला निकालेपछि विवेकलाई किनारमा उभिन लगाइन् र कुलोमा धकेलिन्,’ एसपी अधिकारीले भने ।
विवेक हत्याबारे पत्रकार सम्मेलनमा उनले विष्ट परिवारबीच रिसिइबी रहेको पनि स्पष्ट पारे पनि के रिसिइबी हो ? त्यो स्पष्ट खुलाइएको छैन, यो अनुसन्धानले खुलाउने निश्चित छ । वास्तवमा एक दिदीले कसरी भाइको हत्या गर्न सक्छ ? एक निर्दोष, नादान, अबोध बालकलाई किन हत्याको निशाना बनाइन् दिदीले र उनले लगाइन् टीका अपराधीकोरु यो विषय निक्कै गम्भीर र सोचनीय विषय हो । मानिसहरुमा कसरी अपराधिक सोचको विकास हुन्छ, जसले आफूभित्रको विवेकलाई मार्छ र समाजका विवेकहरुले विनाकारण कुलोमा डुब्नुपर्छ ?
यो घटनाका पछाडि कुनै न कुनै रुपमा समाज नै जिम्मेवार हुने समाजशास्त्रीहरुको तर्क नकार्न सकिन्न । घटनालाई हेर्दा भर्खर १५ वर्षकी एक किशोरीमा आपराधिक सोच, मनमा पाप पलाउनुमा उनमा बढेको महत्वकांक्षालाई जिम्मेवार तत्वका रुपमा लिन सकिन्छ । काठमाडौँ अर्थात् सहर, धेरैको सपनाको सहर, अझ नेपालको राजधानी, यो सहरमा आउनका लागि उनले विचरा विवेकलाई प्रयोग गरिन्, उनले विवेकको खुट्टाको चाँदीको बाला देखिन् ।
हाम्रो समाज क्रमशः पैसामुखी बन्दैछ, सुविधामुखी बन्दैछ। पैसाविना, सुविधाविना बाँच्नै नसक्ने सोचमा पुगेको एक नवयुवाको प्रतिनिधि पात्र हुन् विवेकको हत्यामा संलग्न दिदी र उनलाई सहयोग गर्ने अर्को नवयुवा । अहिले युवाहरु क्रमशः पूँजीवादी खाडलतिर भासिँदै गएका छन् । उनीहरु पैसाका लागि जे गर्न पनि तयार भइरहेका छन् । वास्तवमा पूँजीवादको विशेषता नै पैसाका लागि इमान गुमाउनु, विवेक गुमाउनु हो । यही विवेक गुमाउने व्यवस्थाको सिकारमा परेकी हुन् टीकापुरका अबोध विवेक ।
अहिले युवाहरु विभिन्न किसिमले महत्वकांक्षी बनिरहेका छन् । कयौं युवाहरु कूलतमा परेका छन्, कयौं विभिन्न खाले नशामा परेका छन् । उनीहरुमा छोटो समयमा छिट्टै प्रगति गर्ने, कम मिहिनेत गरी छिट्टै पैसा कमाउने ध्याउन्नमा छन् । अहिले विकास भइरहेको सूचना प्रविधिले मानिसलाई एक्ल्याएर आक्रामक बनाउँदैछ । आफ्नो धरातल बिर्साएर महत्वकांक्षाको अल्याख सपनामा भुलाउन सूचना प्रविधिले सघाउँदैछ ।
घटना बाहिरिएसँगै घटनालाई समाजको परिवेशसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसमा समाजशास्त्र अध्यापनरत सुरेश बखुन्छेंको भनाइ छ । उनले अहिलेका पुस्तामा क्रमशः सामाजिकीकरण कम हुँदै गएको बताउँदै सामाजिकीकरणको अभावमा समाजमा अपराध बढ्न सक्ने औंल्याए। ‘समाजका नयाँ पुस्तामा देखासिकीपन, आधुनिकीकरण बढेको छ, उनीहरुमा टिभी, मोबाइललगायतमा आउने विभिन्न सिरियलको प्रभाव ज्यादा देखिन थालेको छ’, उनले भने, ‘हाम्रो सामाजिक संरचनाअन्तर्गत संयुक्त परिवारबाट एकल परिवारमा परिणत भएको छ, परिवारमा विचलन आएको छ, सो घटनाका पछाडि सोसियो इकोनोमिक कारण लुप्त छन् ।’, यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।